Taliska Ciidammada Xoogga Dalka Oo Maxkamadda Ciidammada Ku Wareejiyey Nin Lagu Qabtay Jaakad Qarax Ah
April 7, 2012 Markacadeey
Taliska Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa Maxkamadda Ciidammada Qalabka Sida ku wareejiyey nin isagu qirtay inuu ahaa xubin Al-Qaeda u fududeyn jirtay qaraxyadii ay Muqdisho ka geysan jireen ayadoo ninkanina lagu qabtay Jaakad walxaha qarxa lagusoo rakibay.
Abaanduulaha Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed General C/kariin Yuusuf Aadan (Dhegabadan) oo ka hadlayey goobta lagusoo bandhigay ninkan oo aheyd Taliska Villa Baydhabo ayaa tilmaamay in ninkan uu isku dayey inuu laaluush siiyo askari ka tirsan Ilaaladiisa isaga oo u ballan qaaday lacag gaareysa 20,000$ (Labaatan Kun oo doolar) hadii uu seddex Jaakadood oo qarax ah u gudbiyo iyo ragii lagu xeri lahaa kadibna ninkan sidaasi gacanta loogusoo dhigay.
Wasiirudowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamuud Macalin Nuur oo isaguna goobta ka hadlay ayaa uga mahad celiyey Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed sida ninkan ay gacanta ugu soo dhigeen isaga iyo walxaha qarxa ee uu doonayey inuu dadka ku baabi'iyo.
Ninkan oo isna magaciisa ku sheegay C/raxmaan Cali Cantoob ayaa sheegay in jaakadahan ay u keeneen rag isaga telefoon lagula xiriiriyey balse uu kooxda Shabaab mudo la shaqeyn jirey isaga oo heshiisyada noocan oo kale ah u raadin jirey iyo dadka u fududeeya goobaha ay qaraxyada ka geysanayaan.
Gudoomiyaha Maxkamadda Ciidammada Qalabka Sida Gaashaanle Sarre Xasan Maxamed Xuseen(Muungaab) oo isaguna goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in ninkani la waafajin doono waxa sharciga uu ka qabo sida ugu dhaqsiyaha badan.
Riix Halkaan Si Aad U Dhageysato Codadka Abaanduulaha ciidammada Xoogga, Wasirudowlaha Gaashaandhigga, Ninka Jakada Lagu Qabtay iyo Gudoomiye Muungaab.
Talaabadan ayaa qeyb ka ah talaabooyinka ay Ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed ku fashilinayaan qaraxyada iyo shirqoollada ay Maleeshiyada Al-Qaeda usoo maleegayaan shacbiga Soomaaliyeed.